GUDIDA GUUD IYO CUQAASHA BEELAHA CIIDAGALE OO BAAQ KA SOO SAARAY XAALADA DALKA | Toggaherer's Weblog
KULMIYE OO XUSAY 6 APRIL IYO CIIDAMADA AMNIGA OO RASAAS KU KALA KAXEEYEY SOCOD UU MAAGANAA KULMIYE
Guddiga Cuqaasha iyo xubno ka tirsan Guddiga Guud ee Beesha deegaanka Hargeysa ee (Ciidagale), oo xudun u ah deegaanka Hargysa ayaa baaq Nabaddeed u jeediyay dhinacyada siyaasadda Somaliland ee haatan muranku u dhexeeyo.
Kulan Saxaafaddeed ay xalay ku qabteen hotelka Dalxiis ee magaalada Hargeysa, waxay kaga hadleen qiimaha Nabadda iyo sida loogu baahanyahay in ilaalinteeda si wadajir ah la iska kaashado.
“Waa in la wada ilaaliyo Nabadgelyada, taasoo muddadii Somaliland jirtay ay ku dhisnayd. Nabadgelyada la’aanteed Maamul ma jiri karo, waxna ma socon karaan. Sidaa darteed, dhamaan beelaha Somaliland waxaanu ka codsanaynaa in dhinaca wanaagsan laga eego, lana ilaaliyo Nabadgelyada.” Sidaa waxa yidhi Siciid Jaamac Gudaalle oo ah Xoghayaha Guddiga Guud ee beesha Ciidagale.
“Waxaynu ognahay in guux ka jiro Somaliland dhexdeeda, gaar ahaan Xisbiyada siyaasadda. Markaa, waxaanu shirkan u qabanay oo aanu kaga hadlaynaa annagoo aan cidna taabanayn, cid gaar ah eedaynayn in aanu si guud uga hadalo Nabadgelyada Somaliland oo aanaan ka gaabsanayn hoosna uga hadlayn.
Markaynu Somaliland nahay waxaynu ku faanaynaa, la inoogu soo guuray ee la inagu amaanayaa waa Nabadgelyada aynu haysano darteed, Nabadgelyadaana Illaahay baanu uga mahadnaqaynaa, waynu ku soo tacabnay, tacabkeeniina waynu haynaa oo waxaynu maanta ku dhisanahay, gacmaha aynu isku haysanaa ee aynu ku wada joognaa waa Nabadgelyada.
Waxaynu waayo-arag ka nahay colaad kala fogaansho ayaynu waayo-arag ka nahay oo is-nac baynu waayo-arag ka nahay. Markaa, Nabadgelyadaa aynu ku soo caano-maalay ee dalkeenu ku dhisanyahay in aynu ilaalino nin walba xil baa ka saaran.
Xukuumadda, saddexda iyo beelaha waxaanu gaadhsiinaynaa in aynu dhamaanteen Nabadgelyada xil iska saaro oo qof walba ilaaliyo.” Sidaana waxa yidhi Caaqil Cabdiweli oo isna halkaa ka hadlay. Wuxuuna intaa ku daray, in dhinacyada haatan muranku u dhexeeyaa wada hadal ku dhameeyaan khilaafkooda.
Waxa kale oo uu bulshada ugu baaqay in la ilaaliyo dadka ka soo barokacay Koonfurta Soomaaliya. Caaqil Cabdirisaaq Maxamed Askar oo isna ka mid ahaa xubnihii halkaa ka hadlay, ayaa ka waramay sida loogu baahanyahay in dhinacyada. “Arrinta aanu ka hadlaynaa xisbi maaha oo annagu dad dhex ah baanu nahay, wax cid gaar ah gef ku ahna odhan maayo….
KULMIYE waxaan leeyahay 6 April wixii ka dambeeya waxba ma jirayaan idinka aqbali mayno oo taasi wax umaddu dhegaysan karayso maaha, UDUB-na waxaan leeyahay; Guurtidaa noo kordhisay oo sidaas baanu ku fadhiyaynaa arrin meesha le’eg oo idinka soconaya maaha.
Laakiin, wixii la isku qabto ee laysku khilaafo waxa qurux badan in wada hadal lagu dhameeyo oo aanay dawladdu wada hadalka ka waynaan, xisbi kalena ka waynaan, waana in wada hadal lagu dhameeyaa arrinta,” ayuu yidhi Caaqil Cabdirisaaq Askar.
Sheekh Maxamed Axmed Kaahin oo xubin ka ah Guddiga Guud ee Beeshaas oo isna hadal kooban shirkaa ka jeediyay, waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha Diinta Islaamku ka qabto Nabadgelyada iyo ilaalinteeda.
Caaqil Cawil Maxamed ayaa isna naqdiyay muranada soo noqnoda ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda Somaliland, wuxuuna sheegay in taas bedelkeeda loo baahanyahay wax-ka-qabashada iyo ka hadalka horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyo horumarinta guud ee dalka.
“Siyaasad kama hadlaynee, waxaanu ka hadlaynaa in Nabadgelyada Midigta lagu qabto oo ilaalineeda meel looga soo wada jeedsado. Laakiin, haddii aan arrinta siyaasadda eego, Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa haddaan af-xumaan gacani ma xumaato. Markaa, haddaau nahay Madaxdhaqameedka Beesh, dawladdu inay wax cadaadiso ama ay cabudhiso kuma raacsanin.” Sidaana waxa yidhi Caaqil Aabi Xassan Cabdi. Sidoo kale, Caaqil Rashiid Maxamed Jaambiir oo isna halkaa ka hadlay, waxa uu sheegay in shirkoodani ka dambeeyay markii ay qiimeeyeen xaaladda dalku marayo iyo sida loogu baahanyahay in bulshada loo xasuusiyo looguna dhiirigeliyo ilaalinta Nabadgeyada.
“Waxay ila tahay in aan qofna laga aqbali doonin inay Nabadgelyada wax yeesho, Soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa ‘Macal-cune soo bixi doonaa’ markaa cidii Nabadgelyada diidaa iyadaa banaanka iman doonta. Laakiin, waxa wanaagsan in Nabadgelyada laga wada shaqeeyo oo la ilaaliyo,” ayuu yidhi Caaqil Rashiid M. Jaambiir.
Ugu dambayntii, Ku-simaha Guddoomiyaha Guddiga Guud ee beesha Ciidagale Caaqil Axmed Cismaan Cadde-gude oo gebogebadii kulankaa ka hadlay, waxa uu sheegay in beel ahaan ay taageersan yihiin in sida ugu dhakhsaha badan Axsaabtu uga heshiiyaan murankooda, isla markaana meel looga soo wada jeedsado ilaalinta Nabadgelyada.